Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IiPhilippines News Breaking » UMongameli wasePhilippines uyeke ezopolitiko
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • IiPhilippines News Breaking • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Kubalulekile ukuba uDuterte abenomlandeli othembekileyo wokumthintela kumanyathelo asemthethweni-ekhaya okanye kwiNkundla yamaTyala oLwaphulo-mthetho lwaMazwe ngaMazwe - ngaphezulu kwewaka lokubulawa kukarhulumente kwimfazwe yakhe neziyobisi ukusukela ngo-2016.
UMongameli wasePhilippines uRodrigo Duterte ubhengeze namhlanje ukuba uthatha umhlala-phantsi kwezopolitiko.
Abagxeki abaninzi kunye neengcali zopolitiko kwiiPhilippines nakwamanye amazwe basijonga isibhengezo sikaDuterte ngokuthandabuza.
Abahlalutyi bezopolitiko bakwiiPhilippines nakumazwe aphesheya bathi inyathelo likaDuterte linokucacisa indlela yokuba intombi yakhe igqatsele isikhundla.
Ngesiqhelo esothusayo esasiyila intelekelelo yokuba wayevula indlela yokuba umongameli aqhutshwe yintombi yakhe, inkokheli yasePhilippines eyayinempikiswano uRodrigo Duterte wabhengeza namhlanje ukuba akazukungenela unyulo lowama-2022, kodwa uzothatha umhlala-phantsi kwezopolitiko.
Isigqibo sika-Duterte sokushiya ugqatso sinokuyicacisa indlela yokuba intombi yakhe uSara Duterte-Carpio ibalekele umsebenzi ophezulu kweli lizwe.
Uneminyaka eyi-76 Duterte, obengumongameli Filipayinzi ukusukela ngo-2016, akafanelekanga ukuba afune elinye ixesha kwivoti kamongameli yonyaka ozayo, kodwa angalwela ukuba ngusekela-mongameli welizwe kunyulo lonyaka olandelayo.
Nangona iqela lakhe elilawulayo le-PDP-Laban endaweni yalo lonyula uDuterte kwisikhundla sokuba ngusekela-mongameli, wabhengeza ngoMgqibelo ukuba akazukungenela i-VP, esithi esi sigqibo senziwe ngokuphendula "iminqweno yoluntu."
"Namhlanje, ndibhengeza ukuthatha umhlala-phantsi kwezopolitiko," utshilo, evele kwiziko leKhomishini yoNyulo kwikomkhulu laseManila kunye noSenator uChristopher 'Bong' Go, owayelilungu le-PDP-Laban lokuba lilungu likamongameli.
"Eyona nto indoyikisayo… uluvo lwabantu bakwiiPhilippines kukuba andifanelekanga kwaye iyakuba kukwaphula umthetho-siseko ukuthintela umthetho, umoya womgaqo-siseko" ukungenela ubunge-mongameli, wanyanzelisa.
DuterteIsigqibo sokuphuma elugqatsweni sinokuyicacisa indlela yokuba intombi yakhe uSara Duterte-Carpio ibalekele owona msebenzi uphezulu kweli lizwe.
UDuterte-Carpio ngaphambili wathi akazukufuna ubongameli kuba evumelene notata wakhe ukuba mnye kuphela kubo oza kuthatha inxaxheba kunyulo lukazwelonke nge-9 kaMeyi 2022. Ukungabikho kukaDuterte kuvoto kungamvumela ukuba angene ugqatso.
Ngelishwa, oneminyaka engama-43 ubudala wangena endaweni katata wakhe njengosodolophu weSixeko saseDavao xa Duterte waba ngumongameli wasePhilippines kwiminyaka emihlanu edlulileyo. Usebenze njengentloko yesixeko phakathi kuka-2010 no-2013.